Shikhar Post » तस्वीरमा हरियो नेपाल अभियान !
तस्वीरमा हरियो नेपाल अभियान !
शिखरपोष्ट/सोलुखुम्बु । ग्रीनबेल्ट नेपालले हरेक वर्षझै यस वर्ष पनि बृक्षारोपन गरेको छ । हरियो नेपाल बनाउने अभियानस्वरुप ग्रीनबेल्टले सोलुखुम्बु जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा बृक्षरोपन गरेको हो ।
यस वर्ष केरुङ पत्तालेको चांगेस्थानमा करिब ५ सय विरुवा रोपिएको ग्रीनबेल्ट नेपालका प्रमुख अभियन्ता माओ राई यलुङले जानकारी दिनुभयो । हरेक वर्ष निरन्तर बृक्षारोपन गरिरहेको छ । यसअघि नेले, मुक्ली, देउसालगायतका ठाउँमा विरुवा रोपेर जागरण ल्याउने कम गरेको छ ।
‘यस वर्ष करिब पाँच सय विरुवा रोप्यौं’ यलुङले शिखरपोष्टसित भन्नुभयो ‘रुख जीवनको लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले विरुवा रोप्नुपर्छ भन्ने जागरण ल्याउनका लागि मैले यो अभियान थालेको हुँ ।’ उहाँले यो अभियानलाई देशैभरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औल्याउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार यस वर्षको बृक्षारोपन अभियानमा एनएमबी बैंकका प्रसिद्धि राई, दिलकुमारी गुरुङ, सेन्चुरी बैंकका असन खालिङ, सोलु एफएमका नुतन श्रेष्ठ, हिमाल एफएमको विना राई, दुधकोशी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अबि राई, शिक्षक रमेश कुमार राई, जसिहाङ राईलगायतको सहभागिता रहेको थियो । तस्वीर सौजन्यः माओ राई यलुङ